Knowledge – Page3– Ubuntu MM
10/08/2016 10/08/2016 kokoye2007 
ask.ubuntu-mm.net မှ မေးခွန်းကို ဖြေကြားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Swap ကို ပြင်ဆင်ပါ။ sudo gedit /etc/sysctl.conf ဖိုင်ထဲတွင် vm.swappiness ကို ရှာကာ 10 ဟု ပြောင်းပါ။ vm.swappiness=10 အသေးစိတ် https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq မလိုအပ်သည့် software source များကို software source မှသော်၎င်း /etc/apt/sources.list နှင့် /etc/apt/sources.list.d/ အောက်မှ ပယ်ဖျက်ပါ။ sudo gedit /etc/apt/sources.list /var/cache/apt/archives အောက်ရှိ မလိုအပ်တော့သည့် cache များကို ဖျက်ပစ်ပါ။ sudo apt-get autoremove sudo apt-get autoclean စက်တက်ချိန်အတွက် Boot Menu ကြာချိန်ကို လျှော့ချပါ။ BUM ဖြင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ပြီး […]
Tagged boot, fast, Linux, LoCo, opensource, team, ubuntu	Discover
linux@gpio ~#cat readme.txt What is GPIO ? How can do with GPIO ? and Its basic usage ကျနော်အခု rasppberry pi ကနေ Gpio ကို python programming ကနေ တဆင့် ထိန်းချုပ် တဲ့ ပုံစံလေးကို ရှင်းပြချင်ပာတယ်။ GPIO (general purpose input/output ) pin အရေအတွက်ဟာ ကျနော်တို့ အသုံးပြု တဲ့ raspberry pi model အလိုက် ကွဲလွဲမှုတွေရှိနိင်ပာတယ်။ raspberry pi 1 model A/B တွေမှာ GPIO pin 26 […]
Tagged Burma, GPIO, guide, IoT, myanmar, RaspberryPi, ubuntu, ubuntumm	Discover
Knowledge Raspberry Pi Tutorials
07/07/2016 kokoye2007 
Tagged IoT, Pi, RaspberryPi, Smart Home	Discover
Linux BootCamp Note
Linux BootCamp Note via Thura Hlaing
Tagged bootcamp, Kiddy, Linux, note	Discover
Ubuntu 16.0.4 တွင် samba server installation and configuration ပြုလုပ်နည်းကို ပြောပြပေးသွားပါမည်။ Samba ဆိုသည်မှာ File Server တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Linux နှင့် တခြား OS တို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် Samba Server version 4.4.4 အထိ ထွက်နေပါပြီ။ www.samba.org တွင် Offline Package အနေဖြင့်လည်း ဒေါင်းနိုင်ပါသည်။ ယခု samba server ကို မိမိစက်ထဲသို့ install လုပ်ကြပါမည်။ သင်သိပြီးဖြစ်သည့် terminal ခေါ်လိုက်ပါ။ Ctrl+Alt+T တွဲနှိပ်လျင် terminal ကို ရောက်ပါသည်။ install command က သိတဲ့အတိုင်း sudo apt-get […]
Tagged bootcamp, guide, Linux, samba, samba4, ubuntu	Discover
07/03/2016 26/06/2016 Engr Hein Htet
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့ ထောင့်တစ်နေရာမှာ H+ လေးပေါ်လိုက် .. 3G ဖြစ်သွားလိုက်နဲ H+ ဆိုတာ မသိခင် .. အရင်သုံးနေကြ H ဆိုတာ ဘာလဲ သိရပါမယ်။ H – HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) (Year-2006) H+ ထက်ပိုနှေးပါတယ်။ ပျမ်းမျှ 7.2 Mb/s HD video တွေ တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ မြန်နူန်းဖြစ်ပါတယ် H+ – HSDPA Plus (Year-2011) H ထက် ပိုမြန်တာ အသေအချာပါပဲ ။ အင်တာနက် မြန်နူန်း 21 Mb/s ထိရပါတယ်။ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ HD video တွေ […]
Github အသုံးပြုနေသူတွေ Online ပေါ်မတင်ဘဲကိုယ့်ရုံးတွင်း Local မှာ Github လို User Interface နဲ့ Git Server တစ်ခုထားချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Gitbucket ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ အလားတူ Local Git Server ထောင်လို့ရတဲ့ လူသုံးများတဲ့ တခြားဟာတွေရှိပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒီထဲက Gitbucket ကိုလည်း စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါတယ် ။ What is Gitbucket? Gitbucket ဆိုတာ Scala နဲ့ Develop လုပ်ထားတဲ့ Github Clone တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Takezoe ဆိုတဲ့ ဂျပန်လူမျိုး Developer တစ်ယောက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ Github အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ မူရင်းကိုတော့ – https://github.com/gitbucket/gitbucket မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
Overview “Together we have the opportunity to bring real technological freedom to every part of the world, across multiple devices and the cloud, and clothed in an elegant, beautiful, experience. It isabold vision, but our greatest strength in Ubuntu is our community and together we can do this. Come and join us and […]
Tagged core-member, launchpad, member, ubuntu, ubuntu-mm, ubuntumm, wiki	Discover
Application & Softwares Editor Featured Guide Knowledge Tutorials
Sublime Text Editor အသုံးပြုသူတွအေနေနဲ့ Sublime Text Editor မှာ English မဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာစကားတွေရိုက်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းပြင်လို့ရပါတယ် ။ Terminal မှာတစ်ကြောင်းချင်းရိုက်ပါ။ cd .config/sublime-text-3/Packages/ git clone https://github.com/seanliang/ConvertToUTF8.git ဒါဆိုရင် Sublime Text မှာအရှေ့တိုင်းဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်။တရုတ်။ကိုရီးယား စာတွေဖတ်လို့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စာတော့ရိုက်လို့ရဦးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အောက်ပါအတိုင်းထပ်လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ် ။ cd .config/sublime-text-3/Packages/ https://github.com/xgenvn/InputHelper.git ဒါတွေလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Sublime ကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ ။ English မဟုတ်တဲ့ တခြားစာတွရေိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် Ctrl+Shift+Z ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။ Prompt Box တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကနတေဆင့် ကိုယ်ရိုက်ထည့်ချင်တဲ့စာကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီ။